Cali Sandule oo Khaatumo u gacan galay kadibna lasii daayey • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Cali Sandule oo Khaatumo u gacan galay kadibna lasii daayey
Cali Sandule oo Khaatumo u gacan galay kadibna lasii daayey
November 27, 2012 - By: Khalid Yusuf
Cali Maxamuud Axmed (Cali Sandule) oo kamid ah siyaasiyiinta kasoo jeeda gobalka Sool ee taageersan maamulka Soomaaliland, ahna xiligan Guddoomiye kuxigeenka Xisbiga Xaqsoor, ayaa waxaa maalinimadii shalay gacanta ku dhigay ciidamo ka tirsan maamulka Khaatumo.
Cali Sandule oo asagoo maalmahan safaro ku marayey magaalooyinka gobalada Sool iyo Sanaag ee Laascaanood iyo Ceerigaabo ayaa waxaa shalay asagoo safaraya gacanta ku dhigay ciidamada Khaatumo meel aan ka fogeyn degmada Xudun.
Cali Sandulle ayaa sida la sheegay lasii daayey kadib markii uu aqbalay inuusan ka qeyb qaadan olalaha doorashada Soomaaliland dooneyso inay ka qabato gobalka Sool, asagoo kadib la geeyey magaalada Laascaanood ee xarunta gobalka Sool.
Cali Sandule ayaa kamid ahaa xunihii ka qeyb qaatay in deegaanka Sool gaar ahaan magaalada Laascaanood ay u gacan gasho maamulka Soomaliland, wuxuuna hada kamid yahay xisbiga mucaaridka ah Xaqsoor oo uu doonayo inuu codod badan uga helo shacabka gobalada Sool iyo Sanaag.
Warar Horseed Media kasoo gaaraya magaalada Xudun ayaa sheegaya in odayaasha beesha uu ka dhashay Cali Sandulle ay ka codsadeen ciidamada gacanta ku dhigay inay iska sii daayaan.
Cali Sandule ayaa markii uu gaaray magaalada Laascaanood saxaafada u waramay, ayaa sheegay in si fiican ulla dhaqmeen ciidamadii qabtay, isla markaana wuxuu ka gaabsaday inuu faah faahin ka bixiyo qaabkii lagu soo siidaayey.
“….Dhalinyaradii i qabatay wixii aan u sheegi karay waan u sheegay, ayaguna wixii ay ii sheegi kareen waa ii sheegeen…”ayuu yiri Cali Sandule oo u waramayey warbaahinta laga leeyahay Somaliland.
Ayadoo xiligan deegaanada Sool iyo Sanaag uu maamulka Soomaaliland doonayo inuu ku qabto doorashooyinka lagu wado in ay dhacdo maalinta beri ah (28-November-2012), ayaa waxaa hadana jira dad badan oo deegaanka kasoo jeeda oo ayagu diidan qorshaha Somaliland, waxaana jira dhaq dhaqaaqyo badan oo ay wadaan ciidamada taageersan Khaatumo ee ku sugan gobalka Sool.
Waxaa sidoo kale dhaq dhaqaaq ciidan oo xoogleh ka taagan tahay maamulada Soomaaliland iyo Puntland oo ayaguna la sheegaya inay isku horfadhiyaan qeybo kamid gobalka Sanaag.